‘जनतालाई बेसार थेरापी, प्रधानमन्त्रीलाई पाँच करोडको गाडी’ भन्दै गर्जिए कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजाल – Online Sunapati
मुख्य पृष्ठ /News/‘जनतालाई बेसार थेरापी, प्रधानमन्त्रीलाई पाँच करोडको गाडी’ भन्दै गर्जिए कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजाल
०९ असार, काठमाडौंः मंगलबारको प्रतिनिधी सभाको वैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले प्रधानमन्त्रीका लागि महँगो गाडी किन्न भईरहेको तयारीको बारेमा आलोचना गरेका छन् । रिजालले महामारीको समयमा उनले प्रधानमन्त्रीको सुरक्षाका लागि ५ करोडको गाडी किन्ने तयारी भईरहेको कुराको खुलेर विरोध गरेका छन् ।
कोरोना महामारी सुरु हुनुभन्दा अगाडी नै नेपाल प्रहरीद्वारा प्रधानमन्त्रीका लागि किन्ने कुरा भएको फोरजी सुरक्षा सहितको ५ करोड मुल्यको गाडी कोरोना महामारीका कारण गत फागुनबाट रोकिएको छ । रोकिएको सरिद प्रक्रिया असार ३ गतेबाट फेरि सुरु भएको कुराको हल्ला चलेको बताउँदै डा. रिजालले भने, ‘के यो कुरा साँचो हो? यदि हो भने जनतालाई कोरोनाको रोकथामका लागि बेसार थेरापी गराउँने अलौकिक उद्घोष गर्ने प्रधानमन्त्रीका आफ्नो लागि पाँच करोड गाडीमा खर्च गर्न सुहाउँला? बजेट खर्च गर्ने ठाउँ नपाईएला भनेर फजुल खर्च गर्ने तयारी त भएको होईन, गृहमन्त्री ज्यु?’
त्यस्तै, डा. रिजालले नेपाल र भारत बिचको सिमा विवादको बिषयलाई सन्दर्भमा लिदैं केही दिनअघि भएको नेकपा र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी बिचको वैठकलाई अपाच्य बताए । उनले दुई पार्टी बिचको साँठगाठ अपाच्य रहेको बताउँदै भने, ‘यस्तो कुरामा सत्तारुढ दलको ध्यान जान आवश्यक छ । सत्तारुढ दललाई प्रशिक्षण दिने र आन्तिरिक क्षगडा र सत्ता सन्तुलन मिलाउन काम गर्ने कुरा निकै अपाच्य हो ।